Superstars 4 WWE izay tsy nifaninana tamin'ny SummerSlam 4 Superstars WWE izay mbola tsy nifaninana tamin'ny SummerSlam - Hafa
4 lehibe WWE Superstars izay tsy mbola niady tamin'ny lalao tao amin'ny SummerSlam
Wwe fahavaratraNy tantaran'i (SummerSlam) dia teo amin'ny telopolo taona sy sasany, izay mandra-pahatongan'ny daty, amin'ny fitambarany, superstar maro be no niady. Taorian'ny nanombohan'ity hetsika ity tamin'ny taona 1988, Hulk Hogan, Randy Orton(Randy Orton) sy john cenaNy superstar lehibe toa an'i (John Cena) dia anisan'ny SummerSlam im-betsaka.
Ny sasany nandresy ny lalao SummerSlam rehetra, ny sasany tsy maintsy niatrika faharesena, raha misy kosa ny sasany izay tsy maintsy nandresy ary resy imbetsaka. Androany ny fanomanana ny SummerSlam 2021 dia mitohy ihany koa, izay hahitana ireo mpilalao superstar malaza toa an'i Goldberg sy John Cena.
SummerSlam dia isaina amin'ireo hetsika WWE 4 lehibe indrindra amin'ny taona, indrisy fa maro ireo mpihetsiketsika malaza izay tsy nahazo nanararaotra niady tamin'ity hetsika ity hatramin'izao. Ka andao ho fantarina ny momba ny 4 lehibe WWE Superstars izay mbola tsy niady tamin'ny lalao tao amin'ny SummerSlam mandraka androany.
Tompondakan'ny WWE ankehitriny Bobby Lashley
Ianao n̶e̶x̶t̶ 𝘿𝙊𝙉𝙀 @Goldberg #SummerSlam pic.twitter.com/ntykadNF3u
- Bobby Lashley (@fightbobby) 10 aogositra 2021
Ny asan'i Bobby Lashley WWE dia nanomboka tamin'ny taona 2005. Tamin'izany fotoana izany dia hita fa nilalao tamin'ny fizarana karatra afovoany izy tamin'ny ankamaroan'ny fotoana. Tamin'izany fotoana izany dia nanohitra ny Tompondakan'i WWE imbetsaka koa izy, saingy tsy nahazo ny amboara. Tamin'ny farany izy dia lasa Tompondakan'ny WWE tamin'ny asany tamin'ny 2021.
Eritrereto ny fianakavianao alohan'ny hanatrehanao ahy indray. Izy ireo no tsy maintsy hiatrika ny sisa aminao. #WWERaw @WWE pic.twitter.com/qfDiNlJCi7
- Bobby Lashley (@fightbobby) 3 aogositra 2021
Niasa tamin'ny fampiroboroboana an'i Vince McMahon nandritra ny taona maro izy ary tafiditra tao anatin'ny tantara lehibe maro, saingy nahagaga fa mbola tsy niady tamin'ny SummerSlam izy. Tsy maintsy miaro ny fehikibo WWE Championship mifanohitra amin'i Goldberg izy amin'ny 2021, izay sady ho laharam-pahamehana amin'ny SummerSlam.
inona no dikan'ny fifandraisana
firy ny nia jax
ny fomba mahalala ankizivavy tia anao
ny fomba hialana amin'ny fifehezana ny fifandraisako
ny fomba hahombiazanao amin'ny fiainanao